ကိုကိုတွေတကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ သူ့တို့ဘ၀ထဲကဒါမျိုးတွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့လွယ်ကူသွားတတ်ကြတယ် – Trend.com.mm
Posted on July 1, 2018 June 26, 2018 by Shun Lei Phyo
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် တစ်ကယ်ချစ်တတ်သွားတဲ့ အခါ တကယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူပိုင်ဆိုင်သွားရတဲ့အခါမှာတော့ ဒါမျိုးတွေကို သူတို့ဘ၀ကနေစွန့်ပစ်ဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြတော့ဘူးဆိုတာ ယုံလိုက်ပါ….
လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ကြီးချစ်မြတ်နိုးမိသွားတဲ့အခါ မာနဆိုတာဘယ်နေရာကနေထားလို့ထားရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး။ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်စွန်းမာနကြီးတယ်ဆိုပေအုံးတော့ ကိုယ့် ဘေဘီလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ ဒီမာနကိုခ၀ါချဖို့လိုရင်လိုသလိုခ၀ါချသွားတတ်ကြတာသေလောက်အောင်ချစ်မိသွားလို့ပါ။
လူတိုင်းဟာအနည်းနဲ့အများတော့အတ္တကိုယ်ဆီရှိတတ်ကြတာပါပဲ ။ အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိုချစ်တတ်တာမျိုးပါ။ ဒီလိုအတ္တဆိုတာတွေမထားပဲ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အဆင်ပြေရေး သာယာရေး အတွက်ပဲတွေးပေးတတ်ပြီဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးဘ၀အတွက် ဒီကောင်မလေးဟာ သိပ်ကိုတန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့အရာပါပဲ။
(၃) မိန်းမလှ၊ မိန်းမချော
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ မိန်းမလှမိန်းမချော နောက်ဆုံးအားလုံးပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမကောင်းတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ပြီး သူ့ကိုကြိတ်ကြွေနေမှန်းသိရင်တောင်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့မိန်းကလေးအတွက် သစ္စာတရားနဲ့ ချစ်မေတ္တာကိုစောင့်ထိန်းပြီး ကိုယ့်ချစ်သူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ခြားမိန်းမပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကိုစွန့်ပစ်နိုင်တဲ့ယောင်္ကျားမျိုးပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသိပ်မြတ်နိုးမိတဲ့အခါ အပျိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုလတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြတ်နိုးတဲ့သူကမြတ်ကိုမြတ်နိုးနေတတ်တာပါ(ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ) ။မရှိဘူးလို့တော့မထင်လိုက်လေနဲ့ တကယ်ချစ်ရင် ပျိုတာအိုတာထက်လက်ရှိကိုယ်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားမြှင့်တင်ပေးရမလဲ၊ဘယ်လိုပွဲထုတ်ရမလဲပဲတွေးနေတတ်ကြတာပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့စွဲမြဲနေတဲ့အကျင့်တွေကို ပြင်ဖို့ဆိုတာလွန်စွာခဲယဉ်းလှပါတယ်။ ချစ်သူကောင်မလေးကမကြိုက်လို့ဆိုပြီးအတင်းပြင်ခိုင်းလည်း ပြင်ချင်မှပြင်လို့ရတာပါ။ ဆိုတော့ဒီလို ပြင်ရခက်တဲ့အရာတွေကို ကောင်မလေးမကြိုက်လို့ဆိုပြီး ပြုပြင်သွားတာဟာ ကောင်မလေးပြင်ခိုင်းတာကြောင့်ဆိုတာထက်ကိုယ်တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ကိုယ်ရဲ့စွဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်တွေကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါလ်ိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ ဒီလိုခပ်ရှားရှားကိုကို တစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင်တော့ သေတာတောင်လက်မလွှတ်ပဲ ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်သလောက်သူ့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ပေးရင်း မေတ္တာပြန်ထားတတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့…
ယောကငြ်ျားလေးတဈယောကျ တဈကယျခဈြတတျသှားတဲ့ အခါ တကယျတနျဖိုးထားရတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျကိုသူပိုငျဆိုငျသှားရတဲ့အခါမှာတော့ ဒါမြိုးတှကေို သူတို့ဘဝကနစှေနျ့ပဈဖို့ဝနျမလေးတတျကွတော့ဘူးဆိုတာ ယုံလိုကျပါ….
လူတဈယောကျကိုတကယျကွီးခဈြမွတျနိုးမိသှားတဲ့အခါ မာနဆိုတာဘယျနရောကနထေားလို့ထားရမှနျးတောငျမသိတော့ပါဘူး။ ယောကငြ်ျားလေးတဈယောကျစှနျးမာနကွီးတယျဆိုပအေုံးတော့ ကိုယျ့ ဘဘေီလေးစိတျခမျြးသာဖို့ ဒီမာနကိုခဝါခဖြို့လိုရငျလိုသလိုခဝါခသြှားတတျကွတာသလေောကျအောငျခဈြမိသှားလို့ပါ။
လူတိုငျးဟာအနညျးနဲ့အမြားတော့အတ်တကိုယျဆီရှိတတျကွတာပါပဲ ။ အထူးသဖွငျ့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပိုခဈြတတျတာမြိုးပါ။ ဒီလိုအတ်တဆိုတာတှမေထားပဲ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ အဆငျပွရေေး သာယာရေး အတှကျပဲတှေးပေးတတျပွီဆိုရငျတော့ ဒီကောငျလေးဘဝအတှကျ ဒီကောငျမလေးဟာ သိပျကိုတနျဖိုးကွီးလှနျးတဲ့အရာပါပဲ။
(၃) မိနျးမလှ၊ မိနျးမခြော
ယောကငြ်ျားလေးတဈယောကျဟာ သူ့ဘေးပတျဝနျးကငျြမှာရှိနတေဲ့ မိနျးမလှမိနျးမခြော နောကျဆုံးအားလုံးပွညျ့စုံပါတယျဆိုတဲ့ မိနျးမကောငျးတှေ ၀ိုငျးဝိုငျးလညျပွီး သူ့ကိုကွိတျကွှနေမှေနျးသိရငျတောငျကိုယျတနျဖိုးထားတဲ့မိနျးကလေးအတှကျ သစ်စာတရားနဲ့ ခဈြမတ်ေတာကိုစောငျ့ထိနျးပွီး ကိုယျ့ခဈြသူတဈယောကျအတှကျ တဈခွားမိနျးမပေါငျးသောငျးခွောကျထောငျကိုစှနျ့ပဈနိုငျတဲ့ယောကငြ်ျားမြိုးပါ။
မိနျးကလေးတဈယောကျကိုသိပျမွတျနိုးမိတဲ့အခါ အပြိုပဲဖွဈဖွဈ တဈခုလတျပဲဖွဈဖွဈ မွတျနိုးတဲ့သူကမွတျကိုမွတျနိုးနတေတျတာပါ(ခပျရှားရှားရယျပါ) ။မရှိဘူးလို့တော့မထငျလိုကျလနေဲ့ တကယျခဈြရငျ ပြိုတာအိုတာထကျလကျရှိကိုယျနဲ့ရှိနတေဲ့အခြိနျဘယျလိုတနျဖိုးထားမွှငျ့တငျပေးရမလဲ၊ဘယျလိုပှဲထုတျရမလဲပဲတှေးနတေတျကွတာပါ။
လူတဈယောကျရဲ့စှဲမွဲနတေဲ့အကငျြ့တှကေို ပွငျဖို့ဆိုတာလှနျစှာခဲယဉျးလှပါတယျ။ ခဈြသူကောငျမလေးကမကွိုကျလို့ဆိုပွီးအတငျးပွငျခိုငျးလညျး ပွငျခငျြမှပွငျလို့ရတာပါ။ ဆိုတော့ဒီလို ပွငျရခကျတဲ့အရာတှကေို ကောငျမလေးမကွိုကျလို့ဆိုပွီး ပွုပွငျသှားတာဟာ ကောငျမလေးပွငျခိုငျးတာကွောငျ့ဆိုတာထကျကိုယျတကယျခဈြမိသှားတဲ့မိနျးကလေးရဲ့စိတျခမျြးသာမှုနဲ့ကိုယျရဲ့စှဲနပေါတယျဆိုတဲ့ အကငျြ့တှကေိုလဲလှယျခဲ့တယျလို့ပွောရငျ ပိုမှနျပါလျိမျ့မယျ။
ဆိုတော့ ဒီလိုခပျရှားရှားကိုကို တဈယောကျပိုငျဆိုငျထားပွီဆိုရငျတော့ သတောတောငျလကျမလှတျပဲ ကိုယျလုပျပေးနိုငျသလောကျသူ့အတှကျအကြိုးရှိမယျလို့ထငျတဲ့အရာတှကေို လုပျပေးရငျး မတ်ေတာပွနျထားတတျဖို့မမပေ့ါနဲ့…